अक्षय कुमारले आफ्नो पारिश्रमिक पुनः बढाए, अब कति पुग्यो ? – The Public Today
अक्षय कुमारले आफ्नो पारिश्रमिक पुनः बढाए, अब कति पुग्यो ?
विजय कुमार सिंह पुस १४, २०७७ १:०८ am
पुस १४ गते । अक्षय कुमार यतिबेला बलिउडमा सबैभन्दा बढी कमाउने अभिनेतामध्ये एक हुन् । अक्षय कुमार काममा निकै लगनशील छन् र एकदिन पनि ब्रेकमा बस्दैनन् । त्यसैले त कति कलाकारको वर्षमा मुश्किलले एउटा फिल्म रिलिज भइरहेका बेला अक्षय कुमारको भने ४–५ वटा फिल्म रिलिज भइरहेको हुन्छ । अक्षय कुमारका थुप्रै फिल्म सन् २०२१ मा मात्रै नभई २०२२ मा पनि रिलिज हुने तयारी भइसकेको छ । भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचारका अनुसार अब अक्षयले आफ्नो पारिश्रमिक बढाएको खबर प्रकाशित भएको छ ।
अक्षयले आफ्ना निकै मिल्ने साथी फिरोज नाडियाडवालालाई पारिश्रमिकमा विशेष छुट दिने गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् । फिरोजको फिल्ममा उनी २० प्रतिशत कम पारिश्रमिक लिने गरेको बताइन्छ । अक्षय कुमारको पछिल्लो फिल्म ‘लक्ष्मी’ रिलिज भएको थियो । उनको अर्को फिल्म ‘सूर्यवंशी’ बनेर तयार छ । अक्षयले ‘बेल बटम’ को सुटिङ पूरा गरिसकेका छन् । यतिबेला अक्षयसँग ‘अतरंगी रे’, ‘पृथ्वीराज’, ‘राम सेतु’, ‘मिशिन लायन’, ‘रक्षा बन्धन’ जस्ता थुप्रै फिल्म छन् जुन २ वर्षभित्र रिलिज हुनेछ । एजेन्सी